သင့်ဖွက်ထားတဲ့ G-mail က လုံခြုံနေပြီလား ? ~ ဘလော့ခရီးသည်
သင့်ဖွက်ထားတဲ့ G-mail က လုံခြုံနေပြီလား
ဒီနေ့အကြေင်းအရာကတော့ Facebook ပေါ်မှာ တော်တော်များများလည်းသိပြီးသားဖြစ်တဲ့
Facebook Account ရဲ့ ID သို့မဟုတ် Account နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော
Mail (G-mail or Any Mail) ကို သိရှိနည်းဖြစ်ပါတယ်။ Facebookပေါ်မှာ အများစုက
Security အနေဖြင့် ထိုသူတို့ရဲ့ အကောင့်ကို Hack ခံမရအောင်ဆိုလိုတာက
Forget Password ဖြင့် ရိုက်လျှင် Mail ကနေတဆင့် လုပ်ကြတာဖြစ်
အများစု ထိုသူတို့ရဲ့ အသုံးပြုတဲ့ Mail ကိုဖွက်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျတော်က
Security ပိုင်းကိုတော့ ဟိုးအရင်က ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ အခုတစ်ခါမှာတော့
Attack ပိုင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဖွက်ထားတဲ့မေးလ်ကို
ရအောင်ကြည့်နည်းဖြစ်ပါတယ်။ မေးလ်သိရင် ဘာလုပ်ကြမလည်း ?
သင်တို့အပိုင်းပါ။ ကျတော်က Attack ပိုင်းဆိုပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းက
Security and recovery ပိုင်းကို မကင်းမကင်း တွဲဖက်ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲ
စလိုက်ရအောင် Target အနေနဲ့ အကောင့်တစ်ခုကိုပြပါ့မယ်။ဒီတော့ ထိုအကောင့်ကို
ကျတောတို့က Mail မသိဘူးဆိုတော့ သူ့ရဲ့ Accoun ID ကို တစ်ချက်
ကော်ပီကူးလိုက်ပါမယ့် အကောင့် ID ဆိုတာကတော့
www.facebook.com/ ရဲ့ အနောက်က phXXXXXX58ဆို
ဒါကတော့ User ID ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ထို User ID ကို ကျတော်
တို့က ကော်ပီကူးယူပြီးတော့ Browser အသစ်တစ်ခုမှာ အထက်ပါပုံအတိုင်း
Forgot your password? ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါမယ်
Find your account ဆိုတဲ့ နေရာမှာ ခုနက ကော်ပီကူးထားတဲ့
ID ကို ထည့်ပြီး
Search နှိပ်လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း
Password Reset ချဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်
ဒီနေရာမှာ သူသုံးထားတာက v*********2@gmail.comဆိုတဲ့ Mail တစ်ခုကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Longer Access This account ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပြီး How can we reach you?
သင့်ဆီကိုရောက်မယ့် Mail တစ်ခုကို ထည့်လိုက်ပါမယ်။
Continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ့မယ်။ဒါဆိုရင်တော့ အောက်ပါပုံအတိုင်း
Question ဖြေမယ့်အပိုင်းရောက်လာရင် မျှားအနီရောင်လေးပြထားတဲ့
your account with help from friends. ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့
3 Trusted Friends ရွေးချယ်ခိုင်းမယ့်အပိုင်းပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Continue ကိုနှိပ်လိုက်ပါ့မယ်။ ပြီးသွားရင်တော့ သင့်မျက်လုံးထဲ
ထို ၃ယောက်ကို အကြောင်းပြုပြီး Code လှမ်းတောင်းမှာ
ဒီတော့ Send codes to friends ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ့မယ်။ဒီအချိန်မှာ
သင်ဟာ ခုနက How we can reach you? ဆိုတဲ့နေရာမှာ ထည့်ထားခဲ့တဲ့ Mail
ကို ဖွင့်ထားပြီး Inbox ရဲ့ Social Tab မှာ သွားစစ်ဆေးပါ့မယ်။
ခုနက သင်ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ လူ၃ ယောက်ကို Code ပို့လိုက်ပြီ
Facebook က လှမ်း အသိပေးပြီး သင့်အကောင့်ကို ၀င်ဖို့အတွက်
ဒါဆိုရင်ကျတော်တို့က ထို လင့်ခ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်
Tab တစ်ခုအနေနဲ့ ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ
ကျတော်တို့က ထို ပေးထားတဲ့ လင့်ခ်ကို ကော်ပီကူးယူပြီး
Enter ခေါက်လိုက်ပါ့မယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ခုနက သူဖွက်ထားခဲ့တဲ့
V*********2@gmail.com ဆိုတာက အောက်ပါပုံအတိုင်း
မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် သင်ဖွင့်ထားတဲ့
သင် Hide ထားတဲ့ G-mail တစ်ခုက တစ်ကယ်လုံခြုံစွာ ဖွက်